QR Droid code Apk 5.4.3 !!! Free Apk ~ mgkhainghtoo
20:58 မောင်ခိုင်ထူး No comments
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါသူငယ်ချင်းတို့ကိုအဆင်ပြေအောင်လို့ QR Droid ဆိုတာလေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီကောင်လေးက Free စစ်စစ်လေးပါ။ Application လေးတွေကိုတိုက်ရိုက် QR Code ကနေတိုက်ရိုက်
ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲရတာအဆင်ပြေစေပါတယ်။မိမိဖုန်းမှာဒါလေးထည့်ထားတာနဲ့ မိမိလိုချင် Apk ရဲ့ Code
လေးကိုပြချုက်တာနဲ့ဆိုက်ရိုက် Install လုပ်ယူရုံပါပဲ။အသုံးပြုရလွယ်ကူရိုးရှင်းလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။
နောက်ပိုင်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ App တွေကိုကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့သီးသန့်ခွဲတင်ပေးပါ့မယ်။ဘာကြောင့်လဲ
ဆိုတော့ဖုန်းနဲ့အသုံးပြုတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ QR Code လေးကိုသုံးပြီးကြားခံဘာကြော်ငြာမှမရှိပဲတိုက်ရိုက်
Install လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Movie တွေ Software တွေကအစ QR Code လေးနဲ့သက်သက်ခွဲပြီး
ဖုန်းသမားတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ခွဲတင်ပေးသွားပါမယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးကို သူငယ်ချင်း
တို့ဖုန်းထဲမှာဒါလေးကိုအင်စတော့လုပ်ထားလိုက်ပါ။ ဖုန်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလို့ရအောင် Google Play
ကနေတိုက်ရိုက်ချိတ်ပေးထားပါတယ်။ကွန်ပြူတာသမားတွေအတွက် Apk လေးကိုလည်းတင်ပေးထားပါ
ဒီကောင်လေးကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုရင်ဒေါင်းလော့စ်ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေကအစ SD Card
ထဲမှာသီးသန့်သိမ်းထားပေးပါတယ်။ပြီးမိမိ Apk တွေကိုသူငယ်ချင်းတွေကို တဆင့်ပြန် Shared လုပ်လို့
• Touch button “Create”, followed by the relevant option, according to what and how you want to share
• Show QR code toafriend; they’ll be able to scan it from your screen, and receive the shared info inazap!
• QR Droid lets you decode fromaQR code in the Internet, given its URL [INTERNET]
• While using WiFi, you can set QR Droid to show webpage preview only, because that feature can usealot of data [ACCESS_NETWORK_STATE]
• You can save generated QR codes in your SD card [WRITE_EXTERNAL_STORAGE]
• You can scan codes from camera. QR Droid cannot access your camera while you’re not using the app [CAMERA]
• QR Droid lets you turn your camera flashlight on to improve light conditions [FLASHLIGHT]
• QR Droid lets you create shortcuts to your most-used features, to access them withasingle tap! [INSTALL_SHORTCUT]
• QR Droid lists your contacts so you can select one and share their information, without typing anything! Absolutely no information leaves your device, only you can see your Contacts [READ_CONTACTS]
• QR Droid lists your Browser’s Bookmarks, to share them without typing anything. Absolutely no information leaves your device, only you can see your Bookmarks [READ_HISTORY_BOOKMARKS]
• New! “Inbox” and “Feedback” options, using Google’s messaging system, which link directly to DroidLa’s support team [WAKE_LOCK & C2DM]
• New! Added vibration response after scanning [VIBRATE]
ဒါကတော့ကျွန်တော့်ဝက်ဆိုဒ်ရဲ့ Apk ပဲဖြစ်ပါတယ်။